Hafatry ny Papa ho an'ny andro maneran-tanin'ny Tanora: Sampankazo 2015 - Fihirana Katolika Malagasy
Hafatry ny Papa ho an'ny andro maneran-tanin'ny Tanora: Sampankazo 2015
Daty : 17/03/2015
Koa ao amin’i Kristy ry tanora malala no hahitana ny fahatanterahan’ny fikasanareo ho amin’ny soa sy ny tsara ary ny hasambarana amin’ny endriny lavorary. Izy irery ihany no afaka mamaly ny hetahetanareo, izay matetika tsy tanteraka, noho ny fampanantenana poakatin’izao tontolo izao. Arakan ny nolazain’i Md Joany Paoly II hoe : « Izy no hatsarana mahasarika anareo, Izy no mahatonga anareo hangetaheta ny zavatra tena misy fotony, izay manakana anareo tsy ho zatra amin’ny marimaritra iraisana mety hanimba. Izy no manentana anareo hanala ny saron-tava izay manimba ny fiainana, Izy no mamaky ao am-ponareo ireo fanapahan-kevitra lalina tian’ny hafa hogejaina. Jesoa no mahatonga ny faniriana ao aminareo hanao ny fiainanareo ho zava-dehibe » (Alim-bavaka tany Tor Vergata, 19 aogositra 2000 : Documentation catholique, 97 (2000), p. 778 ).
Ny androm-pahatanorana no fotoana ivelaran’ireo haren-dehiben’ny fitiavana anatinareo, ny faniriana lalina ny fitiavana marina, kanto sy lehibe. Hery tsy hay tohaina toy inona no mipoitra avy amin’ny fahafaha-mitia sy ny fahatsiarovana ho tiana izany! Aoka tsy hosimbainareo na hodisoinareo izany soa toavina sarobidy izany. Tonga izany rehefa ampiasaintsika ho fitaovana hahatongavana amin’ny tanjona feno fitiavan-tena ny namantsika mandritra ny fifandraisana aminy, ka indraindray aza dia atao toy ny zavatra hakàna fahafinaretana fotsiny. Maratra sy malahelo ny fo aorian’ireny andram-piainana ratsy ireny. Miangavy anareo aho : aza matahotra ny fitiavana marina, izay nampianari’I Jesoa antsika sy novelabelarin’i Masindahy Paoly manao hoe : “Ny fitiavana dia sady mahari-po no malemy fanahy, ny fitiavana dia tsy mialona, tsy manaonao foana, tsy mieboebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora tezitra, tsy manao an-dolom-po, tsy mifaly noho ny tsy marina ataon’ny olona fa mifaly noho ny fahamarinany, manala tsiny ny zavatra rehetra, manam-pinoana amin’ny zavatra rehetra, manam-panantenana amin’ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy hanam-pahataperana” (1Kor 13, 4-8).
< Hafatry ny Papa Fransoà ho an’ny andro maneran-tanin’ny tanora faha-XXIX - 2014
Hafatry ny Papa Karemy 2014 >